Wonke umuntu uyazi ukuthi izwe Russian amumethe heroes kweqiniso. Wabo ngamandla kwengqondo futhi isimo somzimba ongenza ngempumelelo at izenzakalo ezihlukahlukene yezemidlalo. Omunye lezi fighters isiRashiya, owayeneminyaka bakwazi ukumnqoba izilaleli kwezilwandle, kuyinto Alexander Sarnavsky. ebusheni bakhe, iphindwe ingcebo mncintiswano isipiliyoni, benza into nomusa futhi waletha u-Alexander ezweni elite karate.
Alexander Sarnavsky ungowokuzalwa weRiphabhulikhi Kazakhstan. Born, wabonakala Januwari 17, 1989 edolobhaneni okuthiwa Gorky North-Kazakhstan esifundeni. Kodwa ngo-1998 abazali wakhe bathuthela e-Omsk, lapho ithalente abasha futhi waqala ezemidlalo yakhe indlela. Ngokusebenzisa uyise, u-Alexander Sarnavsky ingena esigabeni club "Lokomotiv" sokulwa. Ngu ngokuwina ubuqhawe zesifunda, le nsizwa ithola ku Awe-Pankration imincintiswano futhi kuthatha isinqumo ukuya epini Melee umqeqeshi odumile Zborowski.
Alexander iziqu laseSiberia State University of Sekutivocavoca, ethola diploma yemfundo ephakeme e okukhethekile "karate."
Alexander Sarnavsky wachitha impi yakhe kuqala sosebenzayo ngoDisemba 2008. Aseqala kwenzakala yimpumelelo. The guy ungase beat Umphikisi a ezingemuva nqunu binda.
Ngokuvamile, i-Tiger (okuyinto isidlaliso wokugaklazeka osezweni MMA Alexander Sarnavsky) wakwazi ukunqoba ngo yakhe yokuqala engu-20 izimpi. streak eside ngokuwina okunjalo kwamenza ukuba akwazi ukusungula uqobo njengoba othanda ukulwa onelungelo ezothatha yezimpi eziphawulekayo kakhulu futhi Championships, zazo nabanye abasubathi abagcina of.
ukulahlekelwa fighter Okokuqala baseSiberia zenzeka kulo mqhudelwano ukukhuthazwa American Bellator 77 ngo-2012. Khona-ke u-Alexander elalihlanganyela Octagon nge sobudala ukulwa okuxubile Richard Clementi, wamnika isinqumo uqhekeko samajaji. ukukhuluma ngendlela efanele, amabili imizuliswano lokuqala Sarnavsky ezintathu olwenziwa, ngeshwa, walahlekelwa ngempela.
Ukunqotshwa kwe-career yakhe ngoba Alexander kwesibili kwaqala impi yakhe noWill Brooks ngoNovemba 2013. Sarnavsky ukunqotshwa wesithathu wahlupheka ulwa nge Pole Marcin Waboshwa ngo-Ephreli 2015, lapho aphuthelwe ekuthumbeni ngedolo, ngenxa lapho omele «Rusfayter" club kudingeka ahlinzwe phezu meniscus.
Eyingqayizivele izimfanelo lokulwa
Cishe njalo ukulwa Aleksandra Sarnavskogo, okuyinto wayinqoba, yaphela nge binda ezingemuva nqunu kusuka emuva. Excellent amakhono wrestling zisobala, futhi ngeke zinganakwa. Ochwepheshe aveze, nokuhle umthelela fighter ubuchwepheshe. Sasha uyakwazi ngempela ukuqedela abaphikisi bakhe punches bese uthumela ku Knockout, ngokuphindaphindiwe waqinisekisa ngo emidlalweni yabo. Ngaphezu kwalokho, ihlosi Punch uyakwazi futhi kakhulu ukulungiselela obusebenzayo akuyona exhaling Kufinyeta ku yenkabazwe. amakhosi amaningi MMA baphikisa ngokuthi guy ngempela onekhono ukuba abe iqhawe ehamba phambili inhlangano global of okuxubile bokulwa.
Ukupheliswa inkontileka Bellator
Ubuholi ukukhuthazwa ekuqaleni Novemba 2015, kwanqunywa ukuba uchithe Sarnavsky. Kufanele kuqashelwe ukuthi okwamanje Alexander wakhe wokugcina nantathu izimpi elahlekile kabili kuphela, nomunye ukunqotshwa sasimelene iqhawe sivikele lokhu izandla league. Ubude irekhodi pro baseRussia has 32 onqobayo e 35 izimpi.
Kuze kube manje, umbhalo wakhe wokugcina mpi Sarnavsky labetibambile Novemba 28, 2015. Imbangi yakhe kwaba Leandro Rodrigues Pontes. Ukuze kujabule abalandeli abavela eRussia, le mpi yathatha esingaphansi komzuzu futhi yaphela ngoba Sasha Knockout siyawina. By the way, isisindo bodumo ukukhanya abasisiwe kusukela Omsk wangaphambili Bellator iqhawe Alexander Shlemenko, ophinda abe Umqeqeshi Sarnavsky.
izibalo ke sika -, Njengoba yaziwa into esinenkani kakhulu. Alexander Sarnavsky, uma ubheka umsebenzi wakhe ngokuya izinombolo, othanda ukulwa ephelele eduze. abasubathi Ababaningi enza iringi noma octagon, kungaba ozibongayo yerekhodi yokunqoba, njengoba in Omsk. Qaphela futhi yokuthi u-Alexander yokunqotshwa bakhe abathathu kanye kuphela elahlekile kwesikhathi, nokuthi akuyona Knockout, kodwa nge ukuzithoba, okhombisa ikhono layo ukumelana nokucindezelwa Umphikisi futhi eshaya izimfanelo volitional, sibonga okuyizinto ekugcineni the best in the ibhizinisi .
Kuyini "AliEkspress"? Indlela ukubhalisa kwi "AliEkspress"? U-oda kanjani ku "AliEkspress"? Uhlolojikelele "AliEkspress"
Year of foundation of Vladimir kanye nonyaka wokukhulunywa kokuqala